Abakaze Bakufundise Lokhu Ekilasini Lokumaketha | Martech Zone
NgoLwesibili, ngo-Mashi 11, i-2014 Douglas Karr
Angikholwa ukuthi iyimfihlo, kepha ngikholwa ukuthi isu eliphumelela kakhulu elivame ukunganakwa ekuthengiseni nasekukhangiseni yilo inani lenethiwekhi yakho. Abantu bavame ukugxila ekubuyiselweni kutshalo-mali, izibalo, ucwaningo, ukufaka uphawu, ukwakheka, izici, ukusebenza kahle, ukukhiqiza, njll njengoba besebenza ngemizamo yabo yokumaketha. Konke lokho kuhle futhi kuhle kepha uma unemininingwane yazo zonke lezo zinto, akukho nokukodwa okukunikeza indlela eya emalini ibhizinisi lakho eliyidingayo ukuze liphile futhi lichume.
Ukumaketha akulutho ngaphandle kwezithameli noma umphakathi. Empandeni yawo, ngikholelwa ukuthi umsebenzi wokuthengisa nokumaketha awukona ukuthengisa, ukuthuthukisa ukwethembana phakathi komuntu onenkinga nesisombululo sakho. Ngihlangane nabantu abababazekayo abasungula imikhiqizo emangazayo… kepha abanayo inethiwekhi yokubathengisela yona. Futhi… okuphambene nalokho… Ngibuke imikhiqizo e-crappy ngempela eyenza ukuthi imakethe futhi ichume. Hhayi ngoba yayingumkhiqizo omuhle, kepha ngoba kwakukhona izethameli lokho ethembekile inkampani eyithengisayo.
Ngokwami, angitshaleli kakhulu njengoba bengijwayele ukwenza ezinkampanini, kwimikhiqizo noma kuzici. Esikhundleni salokho ngitshala kakhulu kubantu. Ngenza isikhathi sokuhlangana nabantu abaningi, ukusiza abantu abaningi, ukunakekela nokuthengisa kulabo abakufanele, futhi ngize ngisebenzise nesikhathi namandla kumathuba lapho kungekho nzuzo eqondile kimi. Konke kuya ngokuthi inethiwekhi ingubani.
Kunosomabhizinisi abathile abaphumelelayo engibaziyo abashise inethiwekhi yabo. Okwabo kuqala inkampani yenza okuhle futhi, ngokuthengisa ngomfutho ophakeme, iyasuka futhi yenza kahle. Kepha zabo Olandelayo inkampani iwa phansi. Kungani? Ngoba ukwethembana akusekho. Kungakho izinkampani ezinobuhlakani zingaqashi ngokuya ngesipiliyoni noma ithalente, zivame ukuqasha ngokususelwa kunethiwekhi ozilethela zona. Inethiwekhi yakho ibaluleke kakhulu kunawe uma kukhulunywa ngokuthengisa nokumaketha. Tshala imali kunethiwekhi yakho futhi uzothola ukuthi uyimpahla eyigugu kakhulu kumqashi wakho noma kumakhasimende akho.
Awungikholwa? Bheka amabhizinisi aphumelele eduze kwakho, unake kakhulu amanethiwekhi wamakhasimende nabathengisi abasebenza nabo. Imali engenayo ivela kubantu - hhayi kusuka kumikhiqizo, izici noma ama-logo amahle. Ngenkathi sidinga ukutshala imali kumuntu osebenza online, inhloso akumele kube ukuthengisa - kufanele kube ukwakha inethiwekhi nokugcwalisa igebe phakathi kwesinqumo sokuthenga nokuthengisa ngebhuloho le ukwethemba.
Amaklayenti ethu abaluleke kakhulu yilabo asebenathi isikhashana futhi bayasethemba. Batshale imali enkulu emisebenzini yethu futhi siqinisekise ukusebenza kwabo ukuze singalahlekelwa ukwethenjwa kwabo. Ngokulandelayo, basilethela nokudluliselwa kwethu okusemandleni… ngoba ukwethemba sekuvele kukhona ngaphakathi kwenethiwekhi yabo. Faka imali kunethiwekhi yakho.
Tags: inani lenethiwekhisocial networkinginethiwekhi emnandi